Siria Hita Amin’ny Fakantsarin’ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2017 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, বাংলা, عربي, 日本語, Español, Ελληνικά, English
Hovic sy Abd dia mpinamana avy ao Alep, avaratr'i Siria. Isan'ireo bilaogera manana ny sary tsara indrindra ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy. Ny bilaogin'i Hovic sy Abd, antsoina hoe Syria Looks [En] sy Syria Winks [En], dia tena varavarankely fampahafantarana an'i Siria. Indro ny fitetezana iray tamin'ny sasantsasany amin'ireo zavabita tsara indrindra avy amin'izy ireo.
Na ireo endriky ny faharavàna bizantina ao Surkania…
Ananan'izy ireo ihany koa ireo sary mampitanàka ahitàna ny mandan'ireo mpiady masina tao Siria. Toy ny mandan'i Margat.
Na ilay lapa tsara aron'ireo “Chevaliers”, noheverina ho ohatra aminà fotodrafitrasa ara-tafika fahagola goavana indrindra sy tsara tahiry indrindra eto an-tany.
Inty ny tatitra an-tsary tsara be momba ireo monastera marobe miparitaka any anaty tendrombohitra ngazana ao Siria, toy ilay iray mampitolagaga, ny monastera Mar Mousa [monasteran'i St. Moïse ilay Etiopiàna]
Tsy ny Tantara irery ihany no tanisain'ny sarin-dry zareo ireo, fa koa ny natiora, ny kolontsaina, ary ny tontolo an-tanandehibe ao Damas sy Alep.